Ciyaartoyda New Kaliya. 30x Wagering Shuruudaha, Max conversions X4 applies.£10 Min Deposit.Slot Games Only.t&c'sapply
Dalka oo hoos waa meesha Redroo, Afyare internetka ku salaysan yahay. Kulankaan ayaa theme ah xoolaha, iyo qaar ka mid ah naadi ugu fiican mobile hareeraha leeyihiin theme la mid ah. Waxaa qoreysa ah adventures ee qof ugu weyn, taas oo kangaroo leh ee cidlada ah ee Australia. Akhri macluumaad dheeraad ah sheegistii on Afyare this.
Ogaanshaha More About Tani Best naadi Mobile
Afyare waxa uu leeyahay 5 duntu, 4 saf iyo 1024 siyaabo inuu ku guuleysto. hortegi lahaa wuxuu ka kooban yahay Marxaladaha in ka tago muuqaal ah guduud kalarka. background ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah muuqaalkii Australian ah semi-oomane. In kulankaan, aad kasban kartaa heshay marka aad dhigma walxood oo isku, on ambadeen wax ku xiga laga bilaabo dhanka bidix.
Waxay leedahay calaamadaha-qiimaha sare ka kooban yihiin eey haysta ul ee afka, labo ka mid ah cockatoos midab casaan, surfer a on surfboard iyo marwada Jeexitaanka u guntaday a. Calaamooyinka Low-qiimaha waxaa ka mid ah astaanta kaadhka ciyaaraha heerka A, J, K, S, 9 iyo 10.
On Side The Wild Iyadoo Best Mobile naadi Game The
Redroo sidoo kale waxa uu calaamad u Wild sida inta badan boosaska ugu fiican mobile heli karaa. icon The duurjoogta ah waxaa lagu sawiray Uluru ama Ayers Rock. duurjoogta ah waxaa laga arki karaa on duntu ku 2, 3 iyo sidoo kale 4. Calaamaddan Badali icon kale oo kasta, si ay kuu caawiyaan in guul degtey.
Astaanta kaliya in duurjoogta Ayers Rock ma beddali karto on duntu waa Map kala firdhiso icon Australia. Astaanta Tani waxay kaa caawin doontaa in kaakicin feature ciyaarta saldhig gunno ah. feature bonus Tani waa wareegsan Free dhigeeysa ah sida hoos ku faahfaahsan.
The Free dhigeeysa Bonus Feature
Iyada oo theme gaar ah oo ku salaysan noocyada dhif ah oo fardo ah, this telefoonka naadi lacagta mobile waa hubi inaad ka dhigo mid aad negaanaya your computer ama mobile in waqti lahayn. Taasi waa sababo xaq u; ku guuleystay abaal qaar ka mid ah xiiso leh.
Waxaad sidoo kale kasban kartaa laablaabi xiiso leh ee lacag la'aanta ah ee ku wareegsan dhigeeysa. Iyada oo icon banjoog ah oo ku saabsan mid ka mid ah duntu 2, 3 iyo 4 taasoo keentay in ay guul ka, inaad heli doonto 2x ama 3x multiplier a. By caga ugu yaraan laba calaamadood oo duurjoogta ah oo keeni guul ah, aad kasban kartaa sarraysaa sida 27x aad heshay. Marka aad dalka safashada labo halyeey oo ku kala firdhiyo wareejin wareega free, waxaad heli doontaa shan dhigeeysa free dheeraad ah abaal marin
Tani waa mid ka mid ah boosaska ugu fiican mobile la gameplay weyn, naqshadeynta nidaamsan iyo animation. soundtrack waa arrin qabow iyo ku haboon ciyaarta mawduuca. Waxaa ku jira RTP ah u sarraysaa sida 95.30%, taasoo la micno ah in la sharad ka mid ah £ 100 inaad heli doonto heshay ka mid ah £ 95,30.